हाँसेरै संसारभर चिनिएका कमे'डियनको यसरि भयो दुखद मृ'त्यु, यस्तो थियो भाइरल हाँसो (भिडियो हे'र्नुहोस) -
Homeसमाचारहाँसेरै संसारभर चिनिएका कमे’डियनको यसरि भयो दुखद मृ’त्यु, यस्तो थियो भाइरल हाँसो (भिडियो हे’र्नुहोस)
हाँसेरै संसारभर चिनिएका कमे’डियनको यसरि भयो दुखद मृ’त्यु, यस्तो थियो भाइरल हाँसो (भिडियो हे’र्नुहोस)
May 4, 2021 admin समाचार 211
स्पेनिस कमे’डियन तथा अभिनेता जुआन जोया बोर्जाको नि’धन भएको छ। जुआनको बुधबार भर्जेन देल रोकि’यो अस्पतालमा ६५ वर्षको उमेरमा नि’धन भएको हो। जुआन मिमको दुनियाँमा निकै भा’इरल तथा चर्चित व्यक्ति हुन्। उनी आफ्नो हाँसोको कारण भाइ’रल भएका थिए।
स्पेनिस एजेन्सी इएफईका अनुसार जु’आनको दे ला कारिडाड अस्पतालमा उ’पचार भइरहेको थियो। उनी सन् २०२० तिरै खुट्टाको समस्या भएपछि अस्प’ताल भर्ना भएका थिए। जुआनले ‘एल रिसिटस’ नाम सन् २००७ जुनमा एक स्पेनिस कमेडिअन कार्य’क्रममा देखा परेपछि पाएका हुन्। कार्यक्रममा उनी आफ्नो जीवनका घट’नाबारे सुनाउँदै थिए।
उनी पहिले एक रेष्टुरेन्टमा काम गर्थे। एक दिन उनले भाँडा छा’डेछन्। समुद्रको छालले त्यो भाँ’डालाई लग्छ भन्ने सोचेर त्यसो गरेका थिए रे। यसरी कथा सु’नाउदा सुनाउँदै जुआन त्यही हाँस्न थाले। उनको हाँसो रोकिएकै थिएन। त्यसपछिको घ’टना सुनाउँदा समेत हाँसेको हाँस्यै भए। कार्यक्रम सञ्चालकले समेत आफ्नो हाँसो थाम्न स’केका थिएनन्।
जुआनको यो हाँ’सोको भिडिओ क्लिप पछि सन् २०१४ तिर भाइर’ल भएकाे थियाे। सामाजिक सञ्जाल प्रयो’गकर्ताहरूले विभिन्न सन्दर्भ र कथामा जु’आनको हाँसोको भिडिओ जोड्दै मिम बनाउन थाले। यसरी मिम’हरूमा जुआन भाइरल हुन थाले। मिम हेर्ने जमातमा उनलाई नदे’ख्ने बिरलै होलान्। इताजा खबरबाट
भिडियो तल हेर्नुहोस यस्तो थियो उनको भाइरल भिडियो:
भारतीय सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरि’रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षकको चट्याङ लागेर मृ’त्यु
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ त हे’र्नुहोस्
August 24, 2020 admin समाचार 9067
April 18, 2021 admin समाचार 595
चर्चित संगीतकार सि.एल शर्माको शब्द संगीतमा तयार भएको गीतको तिब्र रुपमा प्रचार प्रसार भइरहेको छ । कस्तो सुहाको फुली लगाको बोलको गीतको प्रचार प्रसारका लागि संगीतकार सि एल शर्मा, गायक सुरेन चन्द र गायिका विशाखा
सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ हे’र्नुहोस्
March 25, 2021 admin समाचार 896
नेपाली बजा’रमा बिहीबार सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । यस्तै चाँदीको मूल्यमा भने सामान्य गि’रावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महा’संघका अनुसार बुधबार तोलामा ८६ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापा’वाल सुन बिहीबार
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (171379)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (165352)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (164795)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164794)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (163830)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (162323)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161913)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160376)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (155259)